Semalt Explais Ahoana no Hakana Pop-ups Amin'ny Google Chrome
Mba hahafantarana ny fomba hanakanana ireo varavarankely pop-up ao amin'ny Google Chrome dia tena mora. Ny endri-panakanana pop-up dia foana tsy misy, fa ny iray dia afaka manamarina raha mazoto amin'ny sehatra avo lenta. Raha mbola manohy mijery pop-ups ianao dia misy ny safidy hananganana fanitarana fanakanana adikao hanakanana ny pop-ups amin'ny tranokala fananganana tranokala. Raha mbola mitohy ny pop-ups, dia misy ny hevi-dehibe izay nanjary niharan'ny maloto pop-up ny ordinateranao. Ny fanesorana sy fanadiovana ny ordinateranao dia ny hany fomba hanafoanana azy.
Lisa Mitchell, Semalt Manager Success Manager, dia manolotra ireto fomba ireto hanakanana pop-ups ao amin'ny Google Chrome:
Fomba 1: Manitsy ny fanovana Chrome eo amin'ny fitaovana finday:
Atao amin'ny Android na iOS, sokafy ny fampiharana Google Chrome;
Eo ankavia havanana dia tsindrio ny teboka telo,
Fidio ny Safidy. Izy io dia tokony hanondro anao amin'ny lisitry ny sehatry ny tranokala,
Fidio ao amin'ny fitaovana Android 'Site Settings', dia hamindra anao any amin'ny votoatin'ny votoatiny. Ho an'ny iOS, io safidy io dia nomena ny anarana hoe 'Settings Settings'
Eo ambanin'ilay tabilava "Pop-ups", miseho ny fampisehoana iray miseho ho anao hampiova ny fanakanana popup Google Chrome
Manosika ny tsindry mba hanitsiana ny fananganana pop up amin'ny fomba tianao. Rehefa mihetsika miankavia miankavanana ary maneho loko mena, midika izany fa mazoto ny pop-up blocker. Raha manga izany, dia asehony fa tsy misy intsony ny fanakanana pop-up. Ny mifanohitra amin'izany dia marina ho an'ireo izay mampiasa iOS. Asehon'ny mason-tsivana manga fa mijanona ny mainty ary mena ny vidiny.
Fomba 2: Manitsy ny fanovana Chrome eo amin'ny solosaina:
Sokafy ny programa Google Chrome eo amin'ny rafitra fiasan-desktop rehetra, izay ahitana Windows, Chromebook, na Mac OS. Ny Chromebook izay manana toerana misy anao na sekoly dia mety hisakana anao tsy hanova ny pop-
Ny bokotra menamena dia eo amin'ny ilany ankavanan'ny navigateur ary mampiseho tarehintsoratra avo telo
Avereno jerena ny menu-drop-down sy mifantina ny bokotra fanovana. Manindrahindra anao amin'ny takelaka vaovao miaraka amin'ny menu Chrome Chrome
Ao amin'ny faran'ny pejy dia misy ny bokotra 'Show Advanced Settings'.
Eo amin'ny sehatry ny fiainana manokana ao amin'ny takelaka fikirakirana, tsindrio ny 'Contenu content.' Manokatra varavarankely vaovao vaovao izany
Eo ambanin'ilay lohatenin'ny 'Pop-ups', dia mifidy ny tsy hamela tranokala hampiseho pop-ups (recommended);
Click Done. Manidy ny varavarankely izy ary mamonjy ny fanovana vaovao. Ny fampahafantarana eo amin'ny ilany ankavanana amin'ny bara fitadiavana izay tahaka ny varavarankala fanovozana amin'ny X dia fampahafantarana fa nanakana ny pop-up (Chrome) i Chrome.
Ny fomba iray ahafahana mamela pop-ups amin'ny tranonkala iray dia ny manindry ity icon-nao ity ary misafidy ny hamela pop-ups amin'ny tranonkala misy anao amin'izao fotoana izao.
Fomba 3: Fametrahana Adblocker:
Sokafy Google Chrome. Ny baikon'ny birao amin'ny tranokala dia tsy mila fepetra fanampiny. Ho an'ny fitaovana finday, ny iray dia tsy maintsy manana rindrambaiko fanakanana adin-tsolika ary amin'ny finday fototeny;
Sokafy ny takelaka fikirakirana Google Chrome;
Tsindrio ny 'Extensions' eo amin'ny sisitra havia havia izay manokatra lisitry ny fanitarana rehetra napetraka ao Chrome
Fidio mba 'hahazo bebe kokoa.'
Ao amin'ny fivarotana extension, fikarohana ny fampitahana Adblock. Ny ankamaroan'ny dia Adblock, Adblock Plus, na Ublock. Tranonkala fanasan-koditra manonta raha toa ka manakatona ny votoaty ny adblocker tsy tianao hotratrarina;
Hanampy Chrome. Ny safidy dia miseho amin'ny zo amin'ny fanitarana. Chrome dia manamboatra ny fanitarana
Atombohy indray ny browser Source .